कसले हान्यो साउदी अरबको राजधानी रियादमा ब्यालिस्टिक मिसाइल ? || सुनौलो नेपाल
कसले हान्यो साउदी अरबको राजधानी रियादमा ब्यालिस्टिक मिसाइल ?
रियाद: साउदी अरबको राजधानी रियादमा आइतवार राति यमनका ह्थी विद्रोहीले हमला गरेका छन् । साउदी अरबको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सेनाका अनुसार विद्रोहीले दुई ब्यालिस्टिक मिसाइल हानेका हुन् ।
दुवै मिसाइललाई हावामै ध्वस्त बनाइएको छ। यस हमलामा कुनै हताहती भएको छैन । तर स्थानीय मिडियाका अनुसार रियादमा कमसेकम छ शक्तिशाली धमाका भएका थिए । आकाशमा उज्यालो पनि देखिएको थियो । विस्फोटपछि सहरमा धुवाँ फैलिएको थियो । साउदी अरबको समाचार एजेन्सी एसपीएका अनुसार यो हमला स्थानीय समयानुसार राति ८ बजेर ३९ मिनेटमा भएको हो ।
हूथी विद्रोहीको समाचार च्यालन अल-मसिराका अनुसार यी हमलाबाट रियादमा ठुलो क्षति भएको छ । मिसाइलले साउदी अरबको रक्षा मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा निशाना बनाएको थियो । तर रियाद नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले यस कुरालाई गलत बताएको छ।
सन् २०१५ मा यमनमा सिया हूथी विद्रोही र राष्ट्रपति अबेद्राबो मन्सुर हादीको सरकारबीच लडाइँ चलिरहेको छ। हूथी विद्रोही हादी सरकारलाई बर्खास्त गेर देशमा कब्जा गर्न चाहन्छ ।
हुथीविरुद्ध साउदी सरकार यमनको सेनालाई साथ दिइरहेको छ । त्यसपछि साउदीमाथि हूथीले हमला गर्दै आएको छ । इरानले हूथी विद्रोहीहरुलाई सघाइरहेको आरोप साउदी अरबले लगाउँदै आएको छ। उता इरानले भने यो कुरालाई खारेज गर्दै आएको छ ।
सोम, असार ११, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस